WEPỤ MALWARE NA ROGUEKILLER - WINDOWS - 2019
Wepụ Malware na RogueKiller
Mmemme ọjọọ, ihe ntanetị nchọgharị na software nwere ike ịchọrọ (PUP, PNP) - otu n'ime nsogbu ndị isi nke ndị ọrụ Windows taa. Karịsịa n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ antiviruses na-ahụghị "ihe omume ndị dị otú ahụ, ebe ọ bụ na ha adịghị ezu nje.
Ugbu a, enwere oke ngwaọrụ iji nweta ụdị egwu dị otú a - AdwCleaner, Malwarebytes Anti-malware na ndị ọzọ nwere ike ịchọta na nyocha kachasị iwepụ Software Wepụ Ngwaọrụ, na n'isiokwu a ọzọ ihe omume dị otú ahụ bụ RogueKiller Anti-Malware si Adlice Software, banyere iji ya na nyochaa nsonaazụ ya na ọrụ ọzọ na-ewu ewu.
Jiri RogueKiller Anti-Malware
Tinyere ngwaọrụ ndị ọzọ maka ihichapu na software na-achọghị, RogueKiller dị mfe iji (ọ bụ eziokwu na usoro ihe omume ahụ adịghị na Russian). Uru ya na Windows 10, 8 (8.1) na Windows 7 (na ọbụna XP).
Ntị: usoro ihe omume ahụ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị dị maka nbudata na nsụgharị abụọ, otu n'ime ha dị ka Old Interface (nke ochie interface), na mbipute ya na ochie Rogue Killer interface na Russian (ebe ibudata RogueKiller bụ na njedebe nke ihe onwunwe). Nyochaa a weere nhazi nhọrọ ọhụrụ (echere m, na nsụgharị ga-apụta n'ime ya n'oge na-adịghị anya).
Nchọpụta na nhicha dị na ọrụ ahụ dị ka nke a (tupu nhichaa kọmputa ahụ, ana m akwado ịmepụta ebe nkwụghachi usoro).
Mgbe ịmalitere usoro ahụ (na ịnakwere usoro eji), pịa bọtịnụ "Malite Iṅomi" ma ọ bụ gaa na "Iṅomi" taabụ.
Na nyocha ihuenyo na RogueKiller na-akwụ ụgwọ, ịnwere ike ịmepụta ntọala malware; na nsụgharị free, hụ ihe ga-enyocha ma pịa "Malite Nyocha" ọzọ ịmalite ịchọta mmemme ndị achọghị.
Ọ ga-agbarite nṅomi maka egwu, nke na-ewe, n'ụzọ doro anya, oge dị ogologo karịa otu usoro ahụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
N'ihi ya, ị ga-enweta ndepụta nke ihe achọrọ achọtaghị. N'okwu a, ihe dị iche iche dị na ndepụta ahụ pụtara ihe ndị a: Red - ojiji, Orange - ihe omume ndị a na-achọghị, Grey - mgbanwe ndị a na-achọghị (na ndekọ, ndenye ọrụ, wdg).
Ọ bụrụ na ị pịpị bọtịnụ "Open Report" na ndepụta ahụ, a ga-emepee nkọwa zuru ezu gbasara ihe egwu niile achọtara na mmemme ndị a na-achọghị, ka hazie na taabụ site na ụdị egwu.
Iji wepụ malware, họrọ ihe ịchọrọ iwepu na listi ahụ site na ihe anọ wee pịa bọtịnụ Wepụ Họrọ.
Ma ugbu a banyere nsonaazụ ọchụchọ: a wụnyela ihe dị mkpa nke mpempe akwụkwọ ndị a na-achọghị na ngwaọrụ m, ma e wezụga maka otu (ya na ihe mkpofu ya), nke ị na-ahụ na screenshots, nke a na-adịghị edozi ma ọ bụ site na ihe niile.
RogueKiller chọtara ebe 28 na kọmputa ebe edere aha a. N'otu oge ahụ, AdwCleaner (nke m na-akwado onye ọ bụla dị ka ngwá ọrụ dị irè) chọtara naanị mgbanwe 15 na ndekọ na akụkụ ndị ọzọ nke usoro ahụ otu usoro ahụ.
N'ezie, enweghi ike iwere nke a dị ka ule ebumnobi ma ọ siri ike ịkọ otú nlele ahụ ga-esi na-enwe nsogbu ndị ọzọ, ma e nwere ihe mere ị ga-eji chee na nsonaazụ kwesịrị ịdị mma, nyere RogueKiller, n'etiti ihe ndị ọzọ, nyochaa:
Usoro na njedebe nke rootkits (nwere ike bara uru: Otu esi elele usoro Windows maka nje).
Ọrụ nke onye nhazi ọrụ (dị mkpa na nsogbu nke nsogbu: Ihe nchọgharị ya na-emepe na mgbasa ozi).
Ụzọ mkpirisi nchọgharị (lee Esi lelee ụzọ mkpirisi nchọgharị).
Mpaghara ikuku disk, faịlụ ndị njikwa, egwu WMI, ọrụ Windows.
Ee ndepụta dị oke karịa na ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ ndị a (ya mere, ego ahụ nwere ike iwe ogologo), ọ bụrụ na ngwaahịa ndị ọzọ adịghị enyere gị aka, ana m akwado ịnwale ya.
Ebe ibudata RogueKiller (gụnyere na Russian)
Download RogueKiller n'efu site na saịtị site na saịtị http://www.adlice.com/download/roguekiller/ (pịa bọtịnụ "Download" na ala nke kọlụm "Free"). Na ibe nbudata, ma onye ntinye ihe omume ahụ na ebe nchekwa ZIP nke nsụgharị Portable maka 32-bit na 64-bit nke usoro maka ịmalite usoro ahụ n'ebughị nrụnye na kọmputa ga-adị.
Enwekwara ike ibudata ihe omume ahụ na ochie interface (Old Interface), ebe asụsụ Russian dị. Ọdịdị nke usoro ihe omume mgbe ị na-eji nbudata a ga-adị ka nseta ihuenyo ọzọ.
E nweghị ụdị nnwere onwe: ịmepụta ọchụchọ maka mmemme ndị achọghị, akpaaka, akpụkpọ anụ, iji nyocha ahụ site na akara iwu, nchọpụta mmalite mmalite, nkwado ntanetị site na interface ihe omume ahụ. Ma, ejiri m n'aka, mbipute a na-enye n'efu bụ ihe kwesịrị ekwesị maka nkwenye dị mfe na iwepụ egwu nke onye ọrụ ọ bụla.